एकचाेटि पढाै भान्टाकाे औषधीय गुण ! धेरै राेग निवारणका सहायक उपाय भान्टा - ज्ञानविज्ञान
यति मात्र नभएर भान्टामा भएका अनगिन्ति खनीज, भिटामीन र एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरको छालालाई सफा, रसिलो र मुलायम गराएर राख्न मदत गर्छ । किनकी भान्टामा भएको अकसीकरणरोधी एन्थोसाइनिन्सले छालाको कोशीकालाई क्षती हुनबाट बचाउँछ । जसले गर्दा छाला च्याउरीने, थोप्ला देखिने, रंग वद्लिनेजस्ता समस्याबाट बच्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन भान्टाको रस लगाउँदा कपालको जरा वलियो हुन्छ । भाण्टाको तरकारी नियमित खानाले कपालको वनावट मा सुधार आउनुका साथै चम्किलो भएर जान्छ ।
असामान्य रूपमा पानी मिसिएकाे पातलाे दिसा बारम्बार लाग्याे भने त्याे नै पखाला हाे । याे एउटा सबैले थाहा पाइराखेकाे सामान्य राेग हाे ।
माैसम बदलिनु, पाचन अङ्गकाे काममा गडबडी आउनु, बेमाैसमी आहारबिहार, धेरै नुनिलाे, पिराे, मसालेदार खाना खाएमा, पच्न नसक्ने खानेकुरा खाएमा, तारेकाे, भुटेकाे, धेरै चिल्लाे खानेकुरा खाएमा, दुषित फल र पानीकाे प्रयाेग गरेमा, धेरै चिसाे पानी खानु, पहिला खाइसकेकाे खाना पचिनसक्दै फेरि खाना खानु, पेटमा जुका पर्नु, भय, शाेक, दुःख, मानसिक तनाव, आतंककाे प्रभाव, राती धेरै बेरसम्म बस्नु आदि ।
औँलाकाे नङ बढ्न नदिने र नङ भए पनि फाेहाेर जम्मा हुन नदिने ।
Don't Miss it अम्लपित्त (एसिडिटी) भनेकाे के हाे ? यसबाट बच्ने सहायक उपायहरू यस्ता छन् जानिराखाैँ
Up Next महाभारतका रहस्यमा लुकेका कथा – सुन्दरीसँग बुबाको विवाह गराउन यस्तो ‘त्याग’